Nhau - Kunwa mvura kubva mumvura yegungwa
Shanduko yemamiriro ekunze uye kusimudzira nekukurumidza kwemaindasitiri epasi rese nekurima zvakaita kuti dambudziko rekushaikwa kwemvura yakachena riwedzere kukura, uye kugoverwa kwemvura yakachena kuri kuramba kuchiwedzera, zvekuti mamwe maguta emumahombekombe ari kushomeka zvakanyanya nemvura. Dambudziko remvura rinounza chisingaenzaniswi kudiwa kwemvura yegungwa. Membrane desalination zvishandiso inzira iyo mvura yegungwa inopinda kuburikidza neyakaenzana-inokwanisika mamhepo membrane pasi pekumanikidza, iyo yakanyanyisa munyu nemaminerari mumvura yegungwa yakavharika padanho repamusoro uye inodururwa kunze nemvura yakadzika yegungwa, uye mvura nyowani iri kubuda kubva kudivi rekumanikidza.
Sekureva kweNational Bureau ye Statistics, huwandu hwese hwemvura yakachena muChina hwaive 2830.6billion cubic metres muna 2015, inoverenga nezve 6% yemvura yepasirese zviwanikwa, iri pachinzvimbo chechina pasirese. Nekudaro, iyo yega capita yemvura yakachena zviwanikwa ingori 2,300 cubic metres, inova chete 1/35 yevhareji yepasirese, uye kune kushomeka kwemasitu matsva emvura matsva. Nemhanyisa yekuwedzera kwemaindasitiri uye kukura kwemaguta, kusvibiswa kwemvura yakachena kwakanyanya kunyanya nekuda kwemvura yekurasa indasitiri uye tsvina yemumadhorobha. Desalination yemvura yegungwa inotarisirwa kuve huru nzira yekuwedzera yemhando yepamusoro mvura yekunwa. China yemvura yegungwa desalination indasitiri inoshandisa maakaunti e2 / 3 yeiyo yakazara. Kubva muna Zvita 2015, mapurojekiti ekushambidza mvura yegungwa 139 akavakwa nyika yese, aine huwandu hwese hwemamiriyoni e1.0265million / zuva. Maindasitiri emvura anoverengera 63.60%, uye yekugara mvura maakaundi e35.67%. Iyo yepasi rose desalination chirongwa chinonyanya kushandira pekugara mvura (60%), uye maindasitiri mvura anongopa chete 28%.
Chinangwa chakakosha chekuvandudzwa kwetekinoroji yemvura yegungwa kudzikisa mashandiro. Mukugadzirwa kwemitengo yekushandisa, magetsi emagetsi ekushandisa anowanisa chikamu chakakura kwazvo. Kuderedza kushandiswa kwesimba ndiyo nzira inoshanda kwazvo yekudzikisa mutengo wemvura yegungwa.
Ro Zvakanaka Mvura Kuchenesa Sefa, Ro Mvura Sefa Spare Zvikamu, Nyanzvi Yemvura Yekuchenesa System, Sodium Hypochlorite System Dhizaini, Ro Desalination Maitiro, Mvura Yegungwa Kumvura Yekunwa Machine,